भारतीय सुन्दरी मानुषी छिल्लरलाई मिस वल्र्डको ताज
मंसिर ३-भारतकी मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड २०१७ बनेकी छन् । चीनको सनायामा uP /ftL भएको मिस वर्ल्डको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा विश्वका एक सय ८ देशका सुन्दरीलाई पछि पार्दै भारतकी २० वर्षकी छिल्लरले विश्व सुन्दरीको मुकुट पहिरिएकी हुन् । विश्व सुन्दरी बन्ने उनी छैटौं भारतीय...
लामा पहिलो नेपाल आइडल घोषित
बुटवल, असोज ७- पोखराका बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल घोषित भएका छन् । कतारमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा लामालाई तीन प्रतियोगीमध्ये सबैभन्दा बढी भोट पाएको भन्दै पहिलो नेपाल आइडल घोषित गरियो । बुद्धले महिन्द्राको कारका साथै २० लाख नगद हात पारे । ...
बर्षकै प्रतिक्षित चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ असोज ११ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । दशैंको सप्तमीबाट सोलो रिलिज हुन लागेको यो चलचित्रलाइ लिएर दर्शकमा उत्साह र कौतुहलता दुबै छ । चलचित्रको निर्माणपक्षल राजधानी केन्दि्रत प्रचारलाइ अब मोफसलमा पनि अगाडि बढाउन लागेको...
स्वस्तिमा र नाजिरको मस्ती
सो त नायक नाजिर हुसेन र नायिका स्वस्तिमा खड्काले चलचित्र ‘होस्टेल रिटन्र्स’पछि अर्को चलचित्रमा काम गर्ने मौका पाएका छैनन् । तर, पनि यी दुइको मित्रता भने अझै उस्तै छ । यो चलचित्रले नाजिरलाइ चलचित्र क्षेत्रमा एउटा उचाइ दियो भने स्वस्तिमा ठिकठाक नै चलिन् । तर,...
तपाइँ चाहे जति नै धेरै स्वस्थ किन नहुनुस् वा बाँच्नका लागि अनेकन जुक्ति किन नगर्नुस्, एकदिन मर्नैपर्दछ । कोही धेरै बाँच्ला, कोही छिटै मर्ला कुरा यत्तिमात्र हो । आखिर मान्छे सबैभन्दा धेरै कति उमेरसम्म बाँच्नसक्ला ? अर्थात् मानिसको अधिकतम आयु कति हो ? अहिलेसम्म...
सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी नायिका भरना थापा निर्देशित पहिलो फिल्म ‘ए मेरो हजुर–२’ले यतिबेला सिनेमा घरहरुमा आक्रामक व्यापार गरिरहेको छ । शुक्रबारदेखि राजधानी र मोफसलका झन्डै ६ दर्जन हलमा एकसाथ प्रदर्शनरत फिल्मले तीन दिने विकेन्डमा तीन करोड ग्रस...
बुटवल,साउन २३- किन पत्याउँदैन नायक आर्यन सिग्देललाई अमेरिकाले ? किन बारम्बार भिषा रद्ध हुन्छ आर्यनको ? फेरि एक पटक आर्यनको पासपोर्टमा नेपालमा रहेको अमेरिकी दुतावासले रिजेक्टको छाप लगाएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार आर्यनको यो पाँचौ पटक हो । यसअघि चार पटक अमेरिकी...
स्वरुपाको मिठो बोली सार्बजनिक
हरितालिका तिज नजिकिए संगै दिनदिनै तिजका गितहरु सार्बजनिक भैरहेका छन पछिल्लो समयमा तिज गितको नाउमा युट्युबमा उत्ताउला छाडा गितहरु सार्बजनिक गर्नेक्रम बढ्दो छ। तिज गितमा मौलिकता हराइरहेको बेलामा लोकप्रिय चर्चित गायिका स्वरुपा रसाइलीको मौलिक तिज गित "मिठो...
रामकृष्णको ‘म हुरीमा दियो जलेको देख्छु….
बुटवल चैत्र २८ गायक रामकृष्ण ढकालको गीत सुनेर मनोरञ्जन लिने दर्शकका लागि खुसीको खबर छ । उनकै स्वरमा सजिएको एउटा सुमधुर गीत बजारमा आएको छ । उक्त गीतको भिडियो पनि युट्युवबाट सार्वजनिक भएको छ । ‘म हुरीमा दियो जलेको देख्छु….बोलको गीतमा ढकालको स्वर रहेको छ...
चैत्र २५-बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नायिका रेखा थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट माग्दै हिँड्ने भएकी छिन् । पार्टीका नेताहरुले उनलाई उम्मेदवार बन्नै प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनले भने आफू यसपालि चुनावमा नउठ्ने, बरु...